Diyaarada Hermeus Qorshaheedu Wuxuu Yahay Inay U Duusho New York Ilaa London 90 Daqiiqo – somalilandtoday.com
(SLT-London)-Shirkad Maraykan ah ayaa shaaca ka qaaday qorshe ay ku horumarinayso diyaarad u socota shan saacadood oo ah xawaaraha codka, taas oo New York iyo London ku geyn doonta 90 daqiiqo ama ka yar.
Shirkadda Aerospace Hermeus Corporation, oo fadhigeedu yahay Atlanta, ayaa sheegtay in ay ka heshay maalgelin ka timid maalgelinta abuurka iyo maalgashadayaasha gaarka ah si ay u diyaariyaan diyaarad u soconeysa shan jeer oo ka dhakhso badan, xawaaraha codkeeda.
Haddii mashruuca uu ku guulaysto, waxay isku beddeli kartaa duulimaadyada ganacsiga ee transatlantic. Iminka, safarka hawada u dhexeeya magaalooyinka London iyo New York wuxuu qaataa wax ka badan toddoba saacadood.
Kuwa Sameeyey Diyaaradan ayaa rajeynaya in diyaaradu ay awood u yeelan doonto in ka badan 4,600 Mayl inay jarto, iyada oo xawaare dhan 3,300 mayl soconaysa saacaddiiba.
“Waxaan safar ku tagnay si aan u horumarino kaabayaasha caalamiga ah ee gaadiidka caalamiga ah, taas oo ka dhigtay mid ka mid ah isbarbardhigga xawaaraha, iyada oo si xoog leh u kordhinaysa xawaaraha socdaalka masaafada fog,” AJ Piplica, co-founder iyo agaasimaha guud, ayaa ku sheegay bayaan ku soo baxay website-ka shirkadda.
Aasaasaha Hermeus ayaa ka mid ahaa shaqaalihii hore ee SpaceX, Elon Musk oo bilaabay gantaalaha, iyo Blue Origin, Jeff Bezos ‘ Dhamaan afar aasaas oo wada shaqeeya ayaa ka wada shaqeynayay Generation Orbit, halkaasoo ay ka shaqeynayeen horumarinta qalab casri ah iyo diyaaradda X-Plane ee cusub ee US Air Force.
Paul Bruce, oo ah macalin sare oo ka tirsan Waaxda Aeronautics ee College Imperial College London, ayaa soo saaray digniin taxadar leh.
“Caqabadda ugu weyn ee duulimaadka isdaba-joogga ah ayaa ah iska-horimaad,” ayuu yidhi. “Waxaan u soo dirnay gawaadhida yaryar, waxaanay u duuliyeen iyaga oo isticmaalaya gawaadhida, oo ah nooca hore ee diyaarad jet.” Tani waa mid tijaabo ah, waxaanu haynaa jid dheer oo aan hore u socono oo aan ku aragno diyaaradaha rakaabka ah.
Shirkadda Hermeus maaha ta ugu horeysa ee safar gaaban. Bishii June 2018, Boeing waxay qorsheynaysay qorshe loogu talagalay diyaaradda rakaabka ah. Lockheed Martin iyo Aerion Corporation ayaa sidoo kale ka shaqeynaya sidii ay u abuuri lahaayeen diyaarado isku dhafan.
Haddii lagu guulaysto, diyaarad Hermeus waxay noqonaysaa labo jeer ta ugu dhakhsaha badan oo ah Concorde, oo ah diyaarad samaysay duulimaadkii ugu dambeeyay ee bishii October 2003 waxayna u safartay New York iyo London afar saacadood gudahood.